Consuelo López-Zuriaga. Ajụjụ ọnụ nke Nadal Prize finalist | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Consuelo López-Zuriaga. Ajụjụ ọnụ nke Nadal Prize finalist
Foto: Consuelo López-Zuriaga. Nkọwa Facebook.
Consuelo Lopez-Zuriaga ugha onye ikpeazụ nke Award Nadal ikpeazụ na akwụkwọ akụkọ Enwere ike daa, nke o bipụtara na ngwụsị Eprel. Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ na-agwa anyị banyere ya na ọbịbịa ya na nso nso a na ụwa mbipụta. Enwere m ekele maka obiọma na oge gị.
Consuelo López-Zuriaga. Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Enwere ike daa Ọ bụ akwụkwọ edemede izizi gị wee bụrụ onye ikpeazụ na nrite Nadal ikpeazụ. Kedu ihe ị gwara anyị maka ya na ebe echiche a siri bido?
CONSUELO LOPEZ-ZURIAGA: Ikekwe n'oge mgbụsị akwụkwọ kwuo banyere fragility nke ihe doro anya nke ndụ anyị. Kedu otu ndụ kwa ụbọchị nwere ike isi gbanwee, n'otu ntabi anya, mgbe ị ga-abanye na ọnwụ. Akụkọ ahụ na-anwa ijide oge ahụ mgbe ihe nkịtị kwụsịrị.
Dị ka ibé, ọ na-agwa otú ndụ nke Claudia figueroa, onye ọkàiwu amamịghe nke raara onwe ya nye maka ịgbachitere ikike mmadụ, na-ewe mgbanwe dị egwu mgbe Maurice, ibe gi, achoputara gi na a ọrịa kansa. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, onye protagonist ga-eme mkpebi ndị dị mkpa nke ga-emetụta ihe bụ ndụ ya na ebumnuche ya. Na-enweghị maapụ ma ọ bụ kọmpụta iji chee mbibi nke ọrịa ahụ na nghọtahie nke ọnwụ ihu, ọ ga-amalite ụzọ nke ọ ga-arụrịta ụka n'etiti ụjọ nke ịhapụ nwoke ọ hụrụ n'anya, nkwụsịtụ na ndụ ya gara aga na ịghọta na ọ ga- bụrụkwa ihe ọzọ.
Na nkenke, Enwere ike daa na-akọ a Mgbanwe ịga nke ọma nke njedebe ikpeazụ ya bụ imeri egwu nke ịkwụsị ịbụ ihe anyị nọworo na mbụ.
Echiche nke akwụkwọ akụkọ a ihe ndi ozo na akwukwo ndi ozo. Banyere nke mbụ, o sitere n'ahụmahụ m nwere n'ọrịa cancer na mmetụta nchoputa nke onye ọlụlụ m nwere na ndụ anyị. Banyere nke abụọ, atụmatụ nke akwụkwọ akụkọ a na olu akụkọ ya sitere n'okwu nke Joan Didion, mgbe en Afọ nke Ime Anwansi, o kwuru, sị: «Na-anọdụ ala na nri abalị na ndụ ị na-amabughị agafela ». Didgụ Didion nyere m ụda nke akwụkwọ ahụ. Ọ bụ onye edemede nwere ikike dị egwu kọọ eziokwu tremendously dị ịrịba ama nke ndụ ha na ọ fọrọ nke nta ịwa ahụ nkenke, pụọ n'ịbụ onye e mejọrọ na mmetụta ọ bụla. Achọrọ m itinye olu akụkọ Claudia na ndekọ ahụ, ebe mmetụta uche anaghị ada ada ma ọ bụ gabiga oke, mana ọ na-eru onye na-agụ ya ntị nke ọma.
AL: remember chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
CLZ: Akwụkwọ ndị mbụ m chetara ịgụ bụ Enid Blyton. Ndị amamihe atọ ahụ na-eji otu otu Ise, Ihe Nzuzo Asaa ma ọ bụ site na ụlọ akwụkwọ ahụ - tupu Harry Potter kamakwa ezigbo onye Britain - nke dị Lolọ Malory. na tinkles, eji akwa spain, site na nchikota nwanne m nwoke na ihe omimi nke Asterix na Obelix Ha sokwa m jiri obere nri kpọta na chocolate.
Abụ m nwa agbọghọ na-anabata ihe na onye na-agụ ihe na, ikekwe n'ihi nke a, n'oge na-adịghị anya ederede ederede n'ụdị pobere akụkọ na akụkọ. Akụkọ ndị ọ na-echekwa na akwụkwọ ndetu, tinyere ihe osise na mkpokọta, dị ka foduru nke ndụ nke bidoro ịmalite.
Ndị: Onye isi edemede? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
CLZ: Ọ gaghị ekwe omume ibelata ya na naanị otu, enwere ọtụtụ ndị edemede bụ ndị kpaliri mmụọ m na ndị m chọpụtara na "nnukwu njem eziokwu" nke na-agụ. Ọ na-amasị m ndị edemede narị afọ nke XNUMX na ike ha nwere ike ịkọ dịka Flaubert, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky, dickens, Galdós ma ọ bụ Clarín. Mana m na-enwekwa obi ụtọ banyere anya na-emebi emebi nke ndị America tụkwasịrị n'eziokwu, Hemingway, Dospassos, Scott Fitzgerald, Cheever ma ọ bụ Richard Yates.
Enweghị m ike ichefu ndị ahụ ndị na-ede akwụkwọ na akwukwo akwukwo na, n’otu oge, ju aju akuko nkem Faulkner, Cortázar, Kafka ma ọ bụ Juan Rulfo. Na n'oge na-adịbeghị anya, a sụgharịrị m ịtụ egwu ọgụgụ isi nke Lucia Berlin na ike ya ịgbanwe oke nke squalor ka ọ bụrụ akụkọ na-atọ ụtọ.
CLZ: Gregory samsa, protagonist nke MetamorphosisỌ dị m ka ọ bụ onye pụrụ iche nke na-enye ọtụtụ ọkwa na onye na-egosipụta dị ka onye ọzọ na owu ọmụma na mgbu ụwa, yana nlelị maka onye nke ọzọ, onye dị iche, onye bịara abịa.
Ọzọkwa Emma okechukwu Ọ bụ ihe okike dị egwu nke na-arụtụ aka na mbibi ịhụnanya ịhụnanya na nsị nke mmetụta uche, na-aghọ arche ochie a na-enweghị mgbagha.
CLZ: Enwere m emume ole na ole. Achọghị m itinye ọnọdụ m n'ọnọdụ. Achọrọ m sIlencio, otu kọfị na tebụl doro anya. Iji dee M ga-ege onwe m ntị, ọ dị mkpa ige ntị na ihe odide ahụ na iji anya nke uche hụ ebe ihe mere mere na akụkọ ahụ na-amalite ịrị elu na laptọọpụ ihuenyo.
CLZ: M na-ede duu. Etosiri m ịnọpụ iche dee ya, ebe obu na m bi na obodo, achotala m ohere zuru oke. Gbanwe okporo ámá Madrid maka oke ọhịa emeela ka m nwee ike itinye uche m. Ọzọkwa, mgbe m rapaara, m na-akpọ nkịta ahụ ma gaa maka ime njem n'ọhịa. Agbanyeghị, echeghị m na ị ga-eche maka "ime ụlọ nke gị", tebụl ndị colonial ma ọ bụ ọmụmụ ihe na echiche nke oke osimiri. Mgbe akụkọ ahụ bi n'ime gị, gaa n'ihu ngwa ngwa, na-enweghị nkwụsị na n'agbanyeghị ebe ị nọ. Ana m ede nke ọma n'isi ụtụtụ mgbe mkpọtụ nke ụbọchị abatabeghị isi m na akụkọ ihe mere eme na-agba ọsọ na-enweghị nkwụsị.
M encanta gụọ dina n'ihe ndina ma ọ bụ mee ya n'ihe ndina, ọ bụ ezie na m na-agụkwa na bọs, na Metro, na ụgbọ oloko na ụgbọ elu, na-eche ụlọ na ebe ọ bụla, mgbe akụkọ jidere m na m na-eripịa ibe ọ bụla nke akwụkwọ ahụ ruo mgbe m ruru na njedebe. N’ime otu puku ihe m na-ebu n’akpa m, a na-enwekarị akwụkwọ.
Ndị: Enwere ụdị ndị ọzọ masịrị gị?
CLZ: Agụkwara m nwalee, akụkọ ihe mere eme na-amasị m nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. Na mpụga nke naanị edemede akwụkwọ, ahụrụ m ihe ọkụkụ na akwụkwọ nri.
Ndị: Kedu ihe ị na-agụ ugbu a? Na ide?
CLZ: N’oge na-adịbeghị anya, agụọla m trilogy mara mma nke Rachel Kusk, Backlight, .Zọ njem y Ebube. Achọtawo m pụrụ iche otú Enweghi nkata, nke ihe kpatara nsogbu, nke na-eduga anyi n'ime ihe efu, na-eduga anyi na mpempe akwụkwọ nke na-ejide ihe niile ma mejuputa akwukwo onwe ya. Mụ onwe m bụkwa ịgụgharị a Miguel Delibes ebe obibi, onye edemede ukwu nke na-emechu ihu.
Ma ide, M na-adọ nke na-eme atụmatụ m ọzọ akwụkwọ. A akụkọ banyere ike nke ihe nzuzo: ndị na-emepụta mgbapụta na, ndị ahụ, na ọ ka mma ịghara ikpughe.
Ndị: Kedu ka i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ ahụ dị na gịnị kpebiri ị gbalịa ibipụta?
CLZ: Enweela m ugbu a na ụwa na-ebipụta akwụkwọ, yabụ agaghị m anwa anwa ime nyocha nyocha banyere ọnọdụ ya ugbu a. Mmetụta mbụ m nwere bụ mgbagwoju anya. Ahụrụ m ahịa juru na ya, na-enwe nnukwu ihe odide, agaghị ekwe omume isi n'aka ndị nkwusa a na-emebu eme ihe; ma n'aka nke ọzọ, a hụkwara m a ịgbanwe usoro, ebe na-akpali nnọọ mmasị n'akwụkwọ uzo ozo na formats ibili, na ebe mpi ndị ọzọ iche nke «ntụrụndụ» bụ di ọku. Na nkenke, enwere a esemokwu n'etiti ọdịda na ihe ọhụrụ.
Mkpebi m ịmepụta onwe m iji bipụta jikọtara ya na nkwenye na ya Emechara akwukwo a mgbe onye na-agu ya ruru na peeji nke ikpeazu. Echere m na anwansi nke akwụkwọ bụ na njem ahụ dị n'etiti onye edemede na onye na-agụ ya. Akwụkwọ ọgụgụ ahụ, Umberto Eco ekwuolarị, «ọ bụ igwe ntụgharị asụsụ ».
Ndị: Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ na ị ga-enwe ike idobe ihe dị mma maka akụkọ ọdịnihu?
CLZ: Afọ gara aga abụwo ihe mgbagwoju anya na mwute maka ọtụtụ mmadụ, mana ikekwe akụkụ dị mma bụ eziokwu na ọrịa a egosiwo ihe dị oke mkpa nke ndụ anyị na nzuzu nke mpako di adi. Anyị nwere ike ịmatakwu. Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ ọgụgụ ọgụgụ. Ọtụtụ mmadụ ewerela akwụkwọ ndị na-achọ na peeji ha maka ịchụpụ, nkasi obi, mmụta ... Na nkenke, anwansi nke akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Consuelo López-Zuriaga. Ajụjụ ọnụ nke Nadal Prize finalist
Njedebe na amì
Ọnọdụ ndị dike